नारायण गोपालको दुर्लभ अन्तरवार्ता: अन्तिममा सारा नेपालीलाई के भनेका थिए ? | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
नारायण गोपालको दुर्लभ अन्तरवार्ता: अन्तिममा सारा नेपालीलाई के भनेका थिए ?
फागुन १२, २०७५ | आजको अर्थ
मैले गाउन कुनै लक्ष्य बनाएर सुरु गरेको होइन। मेरा पिताजी आशागोपाल गुरुवाचार्य एक नामुद सङ्गीतकार र गायक उस्ताद हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो घरको बैठकमा प्रायः सधैँ सङ्गीतको महफिल जमिरहन्थ्यो। केटाकेटी अवस्थामै म त्यो महफिल बेलाबेलामा जान्थेँ र गीतहरु सुन्थेँ।
यस्तैमा म बिस्तारै गाउन पनि थालेँ। सर्वप्रथम मैले २०१७ सालमा आफ्नो कलेजको समारोहमा दुइटा गीत गाएँ। ती गीत स्वर्गकी रानी र आँखाको भाखा आँखैले लाई साथीहरुले ज्यादै मन पराए। सबैले मलाई हौसला बढाए र रेडियोमा गीत रेकर्ड गर्नका सल्लाह दिए। त्यसपछि गाउन थालेँ। गाउँदागाउँदै आज यो अवस्थामा पुगेँ। त्यसैले म यसलाई एउटा उद्देश्यहीन यात्रा भन्छु।
रेडियो नेपाल ‘विकास समिति’ अन्तर्गत परेपछि माननीय मन्त्री डा. लोहनीले गर्दन फुलाएर, चर्को स्वरमा भन्नुभएको थियो– ‘अब रेडियो–कलाकारहरुका पनि राम्रा दिन आउन थाले। अब कलाकारहरुको उचित कदर हुनेछ, शोषण हुनेछैन। तर उहाँको त्यो भाषण नक्कली रहेछ। कलाकारहरुको शोषण खै बन्द भएको ?
बीथोवेनले एक ठाउँमा भनेका छन्, वास्तविक कलाकारसँग अहं भन्ने चीज हुँदैन। दुर्भाग्यवश उसले देख्छ, कलाको कुनै सीमा हुँदैन। आफू आफ्नो उद्देश्यभन्दा कति टाढा छु भन्ने कुरा ऊ अस्पष्ट रुपमा मात्रै थाहा पाउँछ। अरुले उसको प्रशंसा गरे पनि ऊभन्दा राम्रो प्रतिभा टाढाको सूर्यझैँ चम्किएको स्थानमा आफू पुग्न नसकेकोमा उदास भइरहन्छ। (पत्रकार हरिहर विरहीले नारायण गोपाल गुरुवाचार्यसँग यो अन्तर्वार्ता माघ २५, ०४२ सालमा साप्ताहिक विमर्शका लागि लिएका थिए)